बुधवार, भदौ ११, २०७६ विजय मल्ल
कोहलपुर (बाँके) : बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढेसगैं आहारा कमी देखिएकोछ । २०६७ सालमा स्थापना भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा यतिवेला २१ वटा बाघ छन् । तर बाघको संख्यामा वृद्धि भएसगैं उनीहरुका लागि आहारा र पानीको व्यवस्थापन गर्न समस्याले निकुञ्जलाई तनाव भइरहेकोछ ।
बाघको संख्याको तुलनामा यसले आहारा गर्ने जनावरको वृद्धि हुन नसक्दा दीर्घकालीन रुपमा बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिदिएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बाघको आहारा वृद्धि गर्नु अबको चुनौती नै बनेकोछ ।
निकुञ्जले शून्य चोरी शिकारीको अवस्था सिर्जना गरि बाघको संख्यामा बृद्धि ग¥यो तर अब भने चोरी शिकारभन्दा पनि आहाराको कमीले बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिदिएकोछ । जसका लागि बाघको आहारा हुने जनावरको वृद्धि र संरक्षणमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
निकुञ्जको ७० प्रतिशत बढि क्षेत्रफल चुरे क्षेत्र पर्छ, बाँकी समथल र जङ्गल । यी क्षेत्रमा घाँसे मैदानको कमी छ, बाघ लगायत जनावरका लागि पिउने पानीको मुहानको कमी छ । ५५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज २१ वटा बाघ रहेका छन् । प्रति बाघ १५ देखि ४० वर्ग किमि क्षेत्रफलको सीमाना रहन्छ । यो हिसाबमा बाघका लागि उचित आहार तथा पिउनको लागि पानीका श्रोत समेत कम छ ।
बाघले आहारा गर्ने जनावरको संरक्षणसँगै बासस्थानको सुधारमा समेत लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेकोछ । बाघको आहारा गर्ने जनावरहरुले घाँस खाने हँुदा यस्ता जनावरको संरक्षणका लागि घाँसेमैदानको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । विज्ञहरूका अनुसार बाघको आहाराका लागि वर्षमा १४ देखि ४० किलोसम्मका सरदर ५० वटा वन्यजन्तु आवश्यक पर्छन् । पछिल्लो गणनामा भेटिएका २ सय ३५ बाघलाई पुग्ने आहारा नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, ती आसपासका वन क्षेत्र र जैविक मार्गमा छ । बाघको आहाराका रुपमा रहने मृग, हरिण, चित्तल, जरायो, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुको संख्या पनि सोही अनुसार वृद्धि भएमा आहारा शृङ्खलामा मद्दत पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विभिन्न कारणले बासस्थान र आहाराको कमी हुदाँ दुर्लभ पाटे बाघ संकटमा पर्छन् । मानवीय चाप, अतिक्रमण र मिचाहा झारले बाघको बासस्थान घट्छ । घाँसे मैदान नहुँदा आहारा प्रजाति पनि घट्दा बाघको बासस्थान संरक्षण गर्नुपर्छ ।
बासस्थान र आहारा प्रजाति बढाउन सके मानव र बाघबीचको द्वन्द्व कम हुने समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण युवा जागरण सञ्जालका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरीले बताउँछन् । उनले भने ‘अहिलेको अवस्था भनेको बाघले आहारा गर्ने जनावरहरुको संरक्षण गर्नु पहिलो दायित्व हो । बाघले वातावरण जोगाउने भएकाले अनावश्यक रूपमा वन विनाश रोक्नुपर्ने बताए ।’ उनले भने ‘वन विनाशले बाघको बासस्थान संकटमा पर्छ, उसको आहारा लोप हुन्छ त्यसो भयो भने बाघलाई जोगाउन सकिदैन ।’
बाघको आहारा जनावर भनेका चित्तल, लघुना, बँदेल, रतुवा लगायतका जनावरहुन् । एउटा बाघले एक पटकमा १५ देखि ४० किलोसम्म मासु खानेगर्छ । जुन उसलाई एक हप्तासम्मका लागि हुन्छ । त्यतीकै मात्रामा उसलाई दिनहुँ पीउने पानिको आवश्यकता पर्दछ । अहिले नै निकुञ्जभित्र पानी र आहाराको कमी हँुदा निकुञ्जका बाघ मानव बस्तीको वरपर जानसक्ने खतरा बढेकोछ । जङ्गलमा सहजै सिकार गर्न सकेन भने बाघ जङ्गलबाट बाहिर आउँछ र मानिस तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्न सक्छ यसले मानवजातिलाई नोक्सान पु¥याउछ अध्यक्ष चौधरीले भने ।
मांसाहारी जनाबर बाघले आहाराको रुपमा चित्तल, जरायो, हरिण, बँदेल, लगुना, रतुवा, गौरीगाई, निलगाई, लंगुर, बाह्रसिंगे, चौका, बाँदर छन् । तर बाघ पाइने तराईका १२ जिल्लामा मृग प्रजातीका जनावर र धेरै चित्तल छन् । सन् २०१८ मा सार्वजनिक राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा पाटेबाघको संख्या २ सय ३५ वटा छन् ।
नेपालमा आहारा सर्वेक्षणको अवस्था
सन् २०१३ को राष्ट्रिय बाघ गणनाका क्रममा गरिएको आहारा सर्वेक्षण र सन् २०१८ को सर्वेक्षणलाई तुलना गर्दा बाघको आहारा प्रजातीको संख्या घटेको पाइएको छ ।
बाघको आहारा प्रजातिको घनत्वका आधारमा लिइएको तथ्यांकमा बर्दियामा सबैभन्दा बढी आहारा भेटिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय बाघ गणना २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको आहारा प्रजातिको घनत्वमा प्रतिवर्ग किलोमिटरका हिसाबमा आहारा प्रजाती निकालिएको थियो । आहारा प्रजातीको सर्वेक्षण लाईन ट्रान्जेक्ट विधिबाट गरिएको थियो ।
बर्दियामा एक वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा त्यहाँ ७७ वटा बाघका आहारा भेटिए । यसअघि सन् २०१३ को गणनाका क्रममा एक वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा त्यहाँ ९३ वटा बाघका आहारा भेटिएका थिए । बर्दियामा अन्य निकुञ्जको तुलनामा आहारा प्रजाती बढी रहेपनि अघिल्लो तथ्यांकको तुलनामा कमी आएको हो । बर्दियामा अहिले ८७ वटा वयस्क बाघ छन् । यसअघि त्यहाँ २०१३ मा गरिएको गणनामा ५० वटा बाघ रहेका थिए ।
आहाराको तुलना गर्दा चितवनमा पनि बर्दियापछि आहारा प्रजातिको अवस्था राम्रो छ । चितवनमा प्रतिवर्ग किलोमिटर करीब ७१ वटा आहारा पाइएको छ । यसअघिको गणनाका क्रममा एक वर्गकिलोमिटरमा ७४ वटा आहारा पाइएको थियो । त्यहाँ १ सय २० बाट घटेर पछिल्लो गणनामा ९३ वटा बाघको आहारा गणना गरिएको छ । समग्रमा त्यहाँ आहारा पनि घटेको पाइएको थियो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा १६ वटा बाघका लागि प्रतिवर्ग किलोमिटर ६८ वटा आहारा पाइएको छ । यसअघिको गणनामा १७ वटा बाघका लागि प्रतिवर्ग किलोमिटर ७९ वटा आहारा पाइएको थियो । यहाँ पनि आहारा प्रजाति घटेको देखिएको छ ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको एक वर्गकिलोमिटरमा क्रमशः २२ र ८ वटा आहारा पाइएको छ । पर्सामा यसअघि २५ वटा र बाँकेमा यसअघि १० वटा आहारा प्रजाती प्रतिवर्ग किलोमिटरमा गणना गरिएको थियो । अघिल्लो गणनामा ७ वटा बाघ रहेकोमा अहिले १८ वटा बाघ छ । यस्तै अघिले गणनामा ४ रहेकोमा अहिले २१ रहेको छ ।
विभागको प्रतिवेदन अनुसार पर्सामा बदेंल, मृग, निलगाई, गौरीगाई बाघका मुख्य आहारा हुन् । यसैगरी चितवन र बाँकेमा विभिन्न मृग प्रजाती, बदेंल, हरिण, चित्तल बाघका आहारा रहेका छन् । बर्दियामा लंगुर, चौका मुख्य आहारा र शुक्लाफाँटा बाह्रसिंगे, चित्तल, बदेंल मुख्य आहारा रहेको पाइएकोछ ।
बाघ किन महत्वपूर्ण ?
हाम्रो पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) को महत्वपूर्ण भाग बाघ होे । इकोसिस्टमको मुख्य भाग नासिने वित्तिकै त्यसको असर समग्र प्रणालीमा पर्छ । अरु धेरै प्रजाति लोप हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका रोगव्याधी तथा प्रकोपहरू निम्तिन्छन् र त्यसले मानव जीवनमै चुनौती थप्छ । त्यसैले बाघको संरक्षण मानिसकै लागि जरुरी छ । संरक्षणका लागि संख्या बढाउनै पर्छ ।
बाघ संरक्षणका चुनौती ?
बाघ संरक्षणमा थुप्रै चुनौती छन् । वासस्थानको खण्डीकरण, संकुचन, मानव र बाघबीचको द्वन्द्व, चोरी शिकारी र अवैध व्यापार तथा रोगव्याधी जस्ता चुनौती एकातिर छन् भने अर्कोतिर यसको आहारा प्रजातिमा आएको कमी पनि बाघ संरक्षणमा चुनौती हुन् ।
समाधान के त ? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा तराईका जंगलहरू बाघका लागि राम्रा बासस्थान हुन् । इकोसिस्टममा सुधार, पर्याप्त आहारको व्यवस्था, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै समाधान हुन्छ । यी सबै व्यवस्था हुनसके बाघको संख्या दोब्बर हुँदा पनि वासस्थानको समस्या हुँदैन ।
आहाराका लागि सरकारको कदम
सरकारले वन्यजन्तुलाई खाने, बस्ने र आहाल बस्ने प्रयोजनको लागि पोखरी निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी यसअघि सात प्रदेश सरकारको नाममा पठाइसकेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनामा साधारण प्रशासन शीर्षकबाट रकमान्तर गरी उक्त रकम प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी संरक्षण र पोखरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार वन्यजन्तुको प्रयोजन र वन डढेलो नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा देशभर एक हजार ७८ वटा पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म यस्ता पोखरीको संख्या ३४ सय पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएकोछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तु तथा डढेलो नियन्त्रणको लागि जङ्गलमा पोखरी निर्माण गर्न सबैभन्दा ठूलो रकम प्रदेश नं.२ लाई उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश नं.२ लाई १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पोखरी निर्माणको लागि निकास गरिएको छ । त्यसपछि ठूलो रकम प्रदेश ५ लाई उपलब्ध गराइएको छ । अर्थले पोखरी निर्माणको लागि भन्दै १ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रदेश ५ को नाममा रकमान्तर गरी पठाएको छ ।
तराईका संरक्षित क्षेत्रहरुका धेरै भू–भागहरु भावर तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा रहेको हुँदा वन्यजन्तुका लागि नियमितरुपमा आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हुने हुँदा स्थायी पानीका स्रोतहरु भन्दा अन्य स्थानमा खानेपानीका लागि, वन्यजन्तुलाई आहाल बस्ने प्रयोजनका लागि र वन डढेलो नियन्त्रण समेतको लागि उक्त बजेट खर्चिनेछ ।
सो बजेटबाट जनावरको मुख्य बासस्थानको छेउछाउको स्थान पहिचान गरी पोखरी निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्ता पोखरीमा पाइप लाइनबाट समेत पानी पु¥याउने व्यवस्था गरिने छ । भैरहेका पोखरीको मर्मत सम्भार गरी पानी जम्मा गर्न सकिने बनाइनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, भदौ ११, २०७६, ०२:०८:००